RW Cumar oo gaaray Jabuuti lana kulmay madxaweyne Ismaaciil Cumar Gelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Cumar oo gaaray Jabuuti lana kulmay madxaweyne Ismaaciil Cumar Gelle
Mareeg.com: Raii’sulwasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmarke iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray dalka Jabuuti, iyagoo ka tegay dalka Itoobiya.
RW Cumar C/rashiid Cali Sharmarke ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Cumar Cabdirashiid iyo Ismaaciil Cumar Gelle ayaa ka wada hadlay Arrimaha ammaanka iyo sidii loo xooji lahaa Xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti iyo Ra’iisulwasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo kulan gaar ah wada qaatay ayaa kulankooda waxa ay uga hadleen Arrimo ay ka mid tahay taageerada dowladda Jabuuti ay u hayso Dowladda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya iyo Madaxweynaha Djibouti oo yeeshay kulan dheer oo qaatay labo saacadood, ayaa Ra’iisal Wasaaruhu waxaa uu warbixin guud ka siiyay xaalada guud ee Somaliya iyo qorshaha dawladda ee hiigsiga 2016-ka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin tababarka ciidanka, dib-u-heshiisiinta, dar-dargalinta shuruucda, dhamaystirka maamuladda goboleedyada, magacaabista guddiyada laf-dhabarka u ah in doorasho ay dalka ka dhaco iyo howlgalinta kuwa hadda jira.
Cumar C/rashiid, ayaa yiri “Waxaan marka hore ka mahad celinayaa soo dhoweynta diirran ee aniga iyo wafdigayga aan la kulannay, Madaxweynaha Djibouti waxaan ka wada hadallay xoojinta xiriirka walaaltinimo ee aan wadaagno iyo adkaynta iskaashiga noo dhexeeya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo ganacsiga labada dal oo mar haddii aan wadaagno waxyaabo badan oo muhiim u ah shacabkeena.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Djibouti taageerada kala duwan ee Soomaaliya ay u fidisay oo sugidda amnigu ay qayb ka tahay iyo sida ay xilli kasta diyaarka ugu tahay in ay gacan buuxda ka gaysato xasilooni buuxda oo ka dhalata Soomaaliya iyo dhismaha haya’adaha dawladda. Waxaana Djibouti ay gacan ka gaysan doontaa sidii aan ku gaari lahayn hiigsiga 2016-ka.”
Ra’iisal Wasaaare Sharmaarke, ayaa inta uu joogo Djibouti waxaa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda kale ee dalka, isla markaana waxa uu booqan doonaa Dekeda Djibouti iyo goobo kale oo muhiim ah.
Dhanka kale, waxaa maanta dalka Jabuuti gaaray wafdi ka socda maamulka Puntland, kaasoo uu hogaaminayo madaxweyne ku xigeenka maamulkaas C/xakiim Camey.